ရေးသားသူ ရွှေဘိုသား on Sunday, June 8, 2008 / အကြောင်းအရာကတော့ ဝတ္ထု
ကျုပ်နာမည်က ဖိုးတေ။ ကျုပ်တို့နေတဲ့ ရွာနာမည်က ပြင်စလူရွာတဲ့ အရင်ကတော့ လပွတ္တာမြို့ နယ်ထဲက ရွာငယ်လေးပေါ့။ အခုဒီဘက်နှစ်တွေမှာ ကျုပ်တို့ ရွာက စပါးက လဲ လွတ်ဖြစ် ရေလုပ်ငန်းကလဲ လွတ်ကောင်းဆိုတော့ မြို့ နယ် အဆင့်ဖြစ်တယ်ဆိုလာ ဘာဆိုလား ဒါတွေတော့ ကျုပ်သိပ်နားမလည်ပါဘူး။ ကျုပ်ကို တိုင်းကလဲ အချိန်ရှိလယ်ထဲ ဆင်းလိုက်၊ ဆားကွင်းသွားလိုက်၊ အစုယူပြီး အငှားချထားတဲ့ ငါးဖမ်းလှေတွေ ဆီက ငွေသွားကောက် လိုက်စာရင်းရှင်းလိုက်။ ပိုတဲ့ အချိန်လေး မှာ ကျုပ်မိသားစု နဲ့နေလိုက်နဲ့ရပ်ရေးရွာရေး လဲ သိပ်မသိပါဘူး။ အပေါ်ဖြူ အောက်စိမ်းဝတ်ပြီး တိုက်ပုံတကားကား နဲ့ကျောင်းဆရာ ဂိုက်စဘောက်ဖမ်းနေတဲ့ ကိုစိန်သန်းတို့လူစုတွေနဲ့ မပတ်သက်ချင်တာလဲ ပါ တာပေါ့ဗျာ။
တကယ်တော့ ကျုပ်ရော ကျုပ်မိန်းမ မိအေးရော ဒီရွာဇာတိတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျုပ်က အညာက မကွေးတိုင်းထဲက ဆီမီခုံဆိုတဲ့ ရွာက။ ကျုပ် မိန်မ ကတော့ ဘယ်မယ်မွေးတယ် ရယ် မသိဘူး။ မေးလဲ မေးမကြည့်ဖူးပါဘူးသေချာ။ ကျုပ်တို့ တွေ့ တာကတော့ ဧရာဝတီတိုင်း ရေတပ်စခန်း ဋ္ဌာနချုပ်မှာ ။ အဲဒီတုန်းက သူက ဆရာကြီးသမီး ၊ ကျုပ်က ၁၀ တန်းနှစ်ခါကျ လို့အိမ်ကထွက်ပြေးလာပြီး လုပ်စရာမရှိလို့စစ်ထဲလိုက်ခဲ့တဲ့ ရဲဘော် အသစ်စက်စက်။ ရုပ်ရှင် တွေ ပြဇာတ်တွေ ထဲကလိုတော့လဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုပဲ နှုတ်ခမ်းပဲခြင်း မီးမှုတ်ခဲ့တာ ဆိုပါ တော့။ သူအထွာနဲ့ သူတော့ရင်ခုန်ဖို့ ကောင်းတဲ့၊ ကြည်နူးဖို့ ကောင်းတဲ့ ပြဿနာလေး တွေ မကင်းခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီတုန်း က ကျုပ်မိန်းမ ဖြစ်မဲ့ မိအေးက ဥပဒေ အဝေးသင် ပထမနှစ်။ ကျုပ်ယောက္ခမတွေ အနေနဲ့ ကလဲ အချိန်တန် ဘွဲလေးဘာလေးရ ပြီးတော့ အရာရှိ တစ်ယောက်နဲ့ ပေးစားဆိုတဲ့ အိမ်မက်တွေ ရှိတာပေါ။ ကျုပ်က ဆရာကြီးကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပါတယ်။ ကျုပ်ဆယ်တန်းအောင်အောင်ဖြေမယ် စစ်သက်ပြည့်တာနဲ့ ဗိုလ်သင်တန်း တက်ခွင့်ရအောင် လုပ်ပါ့မယ် ဆိုတာမျိုးတွေ ဘယ်လောက်ပြောပြော ဆောက်ဖြစ်မှ ကျောင်းဒါယကာ ဖြစ်မဲ့ ကျုပ် နဲ့ ဘယ်သဘောတူမလဲ ။ နောက်ဆုံးတော့လဲ ကျုပ်မိန်းမ မိအေး က ခေါင်းမာမာ နဲ့ဖိုးတေ နဲ့ မပေးစားရင် ကျောင်းဆက်မတတ်ပဲ ခရစ်ယန် သီလရှင် အပြီးလုပ်တော့ မယ် ဆိုတဲ့ စကား တွေ နောက်မှာ မှ လက်ထပ်ခွင်တင် ပြီး အိမ်ထောင်သည် ဘဝ ရောက်ခဲ့ရတယ် ဆိုပါတော့။
အစတော့ တပ်ကပေးတဲ့ အိမ်ထောင်သည်လိုင်း မှာနေ၊ တပ်ကပေးတဲ့ ရိက္ခာစား ၊ တပ်ကပေး တဲ့ လစာသုံးရင်း နေလာတာ သမင်မွေးရင်ကျားစားရင် ဆိုသလိုပါပဲ။ စုမိဆောင်းမိလဲ မရှိ။ ကျုပ်လဲ ဆယ်တန်း ပြန်မဖြေနိုင်၊ ကျုပ်မိန်းမလဲ ကျောင်းဆက်မတတ်နိုင် ဖြစ်လာပါလေရော။ နောက်ဆုံးတော့ ဘာသာခြားတွေ နဲ့ ယူပြီး ရာထူးတော်တော်နဲ့ မတတ်နေရာတော်တော်နဲ့မရတဲ့ အရာရှိတွေ ကိုကြည့်ပြီး သွေးလန့် လာတာကတစ်ကြောင်း၊ ကျုပ်ကိုတိုင် အကြံအဖန် မလုပ်တတ်တာ ကတစ်ကြောင်း၊ ကိုယ်နဲ့ ရွယ်တူ အရာရှိကန်တော်တွေ ၊ ဆရာကြီး ကတော် တွေ သားသမီးတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် ကျုပ်မိန်းမ မျက်နှာငယ်တာက တစ်ကြောင်း ဆိုတဲ့ အကြောင်းကြောင်း တွေ ကြောင့် ဆေးပင်စင် ( တပ်ထဲမှာတော့ အရူးလက်မှတ်ခေါ်တာပေါ့) ရအောင် အကြံအဖန် လုပ်ပြီး ထွက်ခဲ့တယ်။
တပ်ထဲက ထွက်ပြီးခါစတော့ ပင်စင်ရတဲ့ ဆုကြေးငွေလေး နဲ့လင်ကိုမယား နှစ်ယောက် ပုသိမ်မြို့ ပေါ်မှာအိမ်လေး တစ်လုံးငှားနေ။ ကျုပ်ကလဲ ရွာအနီးအနား မှာ စပါးပွဲစားလုပ်၊ ဆားပွဲစား လုပ်ရင်း နဲ့နေလာလိုက်တာ ကျုပ်မိန်မ ဘွဲ့ ရတဲ့ အထိဆိုပါတော့။ မိန်းမဘွဲရ ပြီးလို့ရှေ့ နေလုပ်စားဖို့ ကလဲ ချိန်ဘာဆင်ဖို့ ဆရာမွေးဆရာ ပိုက်ဆံကလဲ မရှိ။ နောက် ဒိုင်တွေ ပွဲရုံတွေကလဲ ရွာတွေ အထိဆင်းကောက်တော့ ကျုပ်တို့ လို ပွဲစားတွေမယ် နောက်ပိုင်း သိပ်အလုပ်မဖြစ်တော့ဘူး ။ မိအေး နောက်ဆုံးနှစ်တက်နေတုန်း ကတောင် ပိုက်ဆံပြတ်လို့ပုသိမ်သင်္ဘောဆိပ်မှာ ညဘက် ပုတ်ပြတ်နဲ့ ကုန်တင်ကုန်ချ သွားလုပ်ရတာ အကြိမ်ကြိမ်။ အဲဒီကနေ ငါ့ဝမ်းပူ ဆာမနေသာဆိုတဲ့ အတိုင်း တခြားပွဲစား အပေါင်းအသင်း တွေ ကတဆင့် ချဲ လက်ခွဲရောင်းတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်တဲ့အထိရောက်ရော။ အဲဒီအလုပ်က အဆင်လဲ ပြေပါတယ်။ ငွေလဲ ဝင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တွေ့ သမျှ လူဆရာခေါ်ရ ။ ဟိုလူကြောက်ရ ဒီလူကြောက်ရနဲ့စိတ်ပျက်ဖို့ တောင် အလွန်ကောင်းတာ ကလား။ နောက်ဆုံး မိအေး ဘွဲဝတ်ရုံကြီး တစ်ကားကား နဲ့ဘွဲတက်ယူတဲ့ နေ့ ပြီးတော့ နောက်နေ့ ထင်တာပဲ ကျုပ်တို့လင်မယား နှစ်ယောက် ရှိသမျှလေး ပိုက်ပြီး ရေကြည်ရာ မျက်နုရာမှာ လယ်လေးချောင်းလေး ရသလောက်ဝယ် ပြီး လုပ်ဖို့နောက် အသက်သိပ်မရခင် ကလေးယူဖို့ တိုင်ပင် ပြီးတဲ့နောက် ပွဲစားလုပ်တုန်း က အဆက်အသွယ်တွေ နဲ့အခုနေတဲ့ ပြင်စလူ ဆိုတဲ့ ရွာလေး ကို ရောက်လာ တာ အခု ဆို သမီးက ၁၀ နှစ် သားအငယ်လေး က ၈ နှစ် ဆိုတော့ ၁၂ မိုးလောက် ရှိထင်ပါ့။
ဒီရွာပြောင်း ခါစတုန်း ကများပြောပါတယ်။ ကျုပ်ကတော့ တောသားဆိုတော့ ကိုယ်တတ်နိုင် တဲ့ လယ်လေး နှစ်ဧက လောက်ပေါ် အငှားကျွဲ နဲ့ လုပ်နေရတာကို ပျော်လို့ ။ ကျုပ်မိန်းမ မိအေး ကတော့ နည်းနည်းမျက်နှာ ပျက်ချင်တာပေါ့။ ဒီလို နဲ့ကျုပ် ရဲ့ မိသားစုကို ကောင်းကောင်း ထားချင်တဲ့ စိတ်နဲ့တွန်းလုပ်တာ နှစ်မိုးလောက်နေ တော့ ကျွဲ အပိုင်ဖြစ်လာ တယ်။ လယ်လဲ ၅ ဧက ဖြစ်လာတယ်။ နောက် အဲဒီနှစ်ပဲ သမီးလေး ကိုယ်ဝန်လဲ ရလာတယ်။ မိန်းမက သားဖွားဆရာမနဲ့ ပဲမွေးမယ်လို့ ပြောပေမဲ့ ကျုပ် ကစိုးရိမ်လို့ ပုသိမ်မြို့ က သားဖွားမီးယပ် ဆရာဝန်မကြီး နဲ့ သေချာကျကျနန မွေးခဲ့တာပါ။ အဲဒီ နောက်ပိုင်း သားလေး မွေး လာ ပြီးတော့ စီးပွားတွေ တရိပ်ရိပ်တက်လာတယ် ဆိုပါတော့။ အခုတော့ ကျုပ်မိန်း မ ဦးစီလုပ်နေတဲ့ ဆားကွင်းတွေ ရယ် ကျုပ်ထောင်ထား တဲ့ ငါးဖမ်းလှေတွေ ရယ်၊ ကျုပ်လယ်တွေ ရယ်နဲ့ဒီရွာမှာတော့ သူဋ္ဌေးစာရင်ပေါက်ဆိုပါတော့။ ရွာခံလူတွေ ကလဲ ကျုပ်တို့ မိသားစုကို ချစ်ကြပါတယ်။ ကျုပ်မိန်းမ သဘောကောင်းတာ အလှုအတန်း မှာ မနှေးတာ ရယ် ဘွဲရပညာတတ်ရှားတာရယ် ပေါင်းတော့ ကျုပ်တို့ မိသားစုက ဒီရွာမှာတော့ ရွာ့မျက်နှာဖုံးမိသာစု ဆိုရင်မမှားဘူးပေါ့လေ။ တစ်ခု ရယ်ရတာက ကျုပ်တို့ အိမ်မှာ ကိစ္စတစ်ခု နဲ့ ဧည့်သည်တွေ လာပြီး နောက်ဆုံး ကျုပ်တို့ စီးပွားတတ်တဲ့ အကြောင်း ကို ရောက်သွားတဲ့ အခါတိုင်း ကျုပ်မိန်းမ နဲ့ ပြောရင် ဘုရားသ္ခင်အလိုတော်အတိုင်းပေါ့ မအေး ရယ်လို့ ပြောတတ် ပြီး ကျုပ် နဲ့ ဆိုရင်တော့ ကံကံ၏ အကျိုးပေါ့ ကိုဖိုးတေ ရာလို့ ပြောတတ်တဲ့ ဓလေ့ ဒီရွာက ကျုပ်တို့ မိသားစု နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ လူတွေမှာ ရှိတတ်တာပါပဲ။
ဒီနှစ်တော့ ကျုပ် သားလေးကို ရှင်ပြုပြီး၊ ကျုပ်သမီးလေးကို နားသမဲ့ နှစ်မို့ လား မသိပါဘူး။ အလုပ်တိုင်းက အရင်နှစ်ကထက်ပို ပြီးငွေဝင်တာမှ ကလေးတွေထိန်းဖို့ ခေါ်ထားတဲ့ ကျုပ် မိန်းမဘက်က တူမတော်တဲ့ကလေးမလေးကိုတောင် နားဆွဲလေး လုပ်ပေးထားသေးတယ်။ ကျုပ်မိန်းမ မျိုးချစ်စိတ်ရှိပုံပြောပါတယ်။ ပြောရဦးမယ်။ ကျုပ်နဲ့ မိအေးက ကလေးတွေ မမွေး ခင်ထဲက သူဘာသာ ကိုယ့်ဘာသာ မခွဲပဲ ဘာသာရေး နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေ အကုန်လုပ်ပေးဖို့သဘောတူထားခဲ့တယ်။ သူတို့ ကြီးမှ သူတို့ ကြိုက်တဲ့ ဘာသာယူပါစေ ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ ဒီတစ်မိုး စပါးပေါ်တာ နဲ့ ရှင်ပြုနားသပွဲ လုပ်မဲ့အလှုရှင်တွေ ကလဲများတော့ မိုးမကျခင်ပဲ အလှုဆိုင်းဝိုင်း အတွက် စရံသတ်တာတို့၊ ရှင်လောင်ဝတ်စုံငှားတာတို့ ဆိုတဲ့ ကိစ္စလေးတွေ ပုသိမ်မြို့ ပေါ်တတ်လုပ်ပြန်ပြန်လာ ခဲ့တာဗျာ။ လူတိုင်းကလဲ ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်လုပ်မဲ့ အလှုအတွက် ထင်ကြေးအမျိုးမျိုး ပေးလို့ ။ ကြားတာတော့ မိအေး ကန်တော့ပွဲ ရွက်မရွက် တောင် ကာလသားတွေ ကြား အပျော်တမ်းအလောင်းအစား လုပ်ကြတယ် ဆိုပါ့ပဲ။ မိအေး က လဲ ကျုပ်မရှိတဲ့ အချိန်တွေတိုင်း ခေါင်းခုလေး တင်ပြီး ကတော့ ပွဲရွက်ဖို့ ကြိတ်ကျင့်နေတာ ဘယ်သူမှ မသိကြဘူး။ ကျုပ်ကိုယ်တိုင်တောင် မသိဟန် ဆောင်နေရတာကို။
အဲဒီနေ့ ကလေတွေစထန် လာတော့ ကျုပ်တို့ ဖြင့်မကြောက်ပေါင်။ ကျုပ်တို့ မြစ်ဝကျွန်ပေါ်ဒေ သ အတွက်က မုန်တိုင်း ဆိုတာအထူးအဆန်းမှ မဟုတ်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ နည်းနည်းကြာလာတော့ အခြေအနေမဟန်မှန်း ကိုယ်စောင့်နတ်က နှိုးဆော်ဟန်တူပါတယ်။ သားရယ်၊ သမီရယ် မိအေး ရယ် ၊ မိအေးတူမလေး ရယ်ခေါ်ပြီး တိုက်ခံအဆောက်အဦးလဲ ဖြစ်၊ အမြင့်ပိုင်းလဲ ဖြစ်တဲ့ ဘုန်းကြီး ကျောင်းဘက်ကို ထွက်လာလိုက်တာ ကံကောင်းတယ်ပြောမလား ကံဆိုးတယ်ပြော မလား။ အချိန်ကြာလာတာ နဲ့ အမျှ မုန်တိုင်းအားကောင်းလာပုံးများ ကျုပ်ဖြင့်ကမ္ဘာပျက်တယ် ဆိုတာ ဒါပဲ နေမယ် လို့ တွေးမိတယ်။ ကလေးတွေ ရဲ့ ငိုသံတွေ၊ သွပ်မိုးတွေ လွင့်သွားတဲ့ အသံတွေ ၊ တဲပြိုတဲ့ အသံ၊ အပင်လဲတဲ့ အသံတွေနဲ့ကျနော် ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံးဆိုတာ တောင် ဒီလောက်ကြောက်ဖို့ အကောင်းဆုံး လို့ ထင်မှတ် ထားတဲ့ ဟာတွေ အားလုံး ရယ်စရာတွေ ဖြစ်ကုန်တယ် ပြောလို့ ရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့တစ်လောက လုံးဝုဝုန်းဒိုင်းကျဲနေတဲ့ ကာလကြီး အပြီးမှာတော့……..
ပထမဆုံး သတိထားမိတာ ဆာလောင်လို့ ငိုနေတဲ့ ကလေးငယ်တွေ ရဲ့ အသံ။ ပြီးတော့ မိအေး ရဲ့“မုန်တိုင်းရဲ့ အပေါ်မှာ ဘုရားသ္ခင်ရှိပါတယ်၊ သခင့်လက်ထဲ့မှာ ကျမတို့ ဘဝကို အပ်နှံထားပါတယ် အာမင်” ဆိုတဲ့ အသံ ။ အဲဒီအသံတွေ ရဲ့ နောက်မှာ စိုးရိမ်စွာ ကြည့်လိုက်မိ တာ သမီးနဲ့ သား ၊ ပြီးတော့ မယ်အေးတူမ။ သမီးနဲ့ သားကို ငေးကြောင်နေတဲ့ မျက်လုံးတွေ အောက်မှာ ခြောက်သွေ့ နေတဲ့ မျက်ရည်စီးကြောင်းတွေ နဲ့ အတူတွေ့ လိုက်ရလို့ စိတ်အေး ရပေမဲ့ မိအေး တူမလေးကိုတော့ မတွေ့ ဘူး။ အခြေအနေငြိမ်သက် စပြုတာနဲ့ကျုပ်တို့ လဲ အိမ်ပြန်ကြမယ်ဆိုပြီး ကလေးတွေကို မိအေးတစ်ယောက် ကျနော်တစ်ယောက် လက်ဆွဲ ပြီး ထွက်အလာမှာ လဲ ကျနေတဲ့ သစ်ပင်ကြီး အဲဒီအောက်မှာ လူသေကောင်တွေ ။ ချက်ခြင်းပဲ မိအေး နဲ့ ကလေးတွေ ကို ဘုန်းကြီးကျောင်း မှာ ဆက်နေခဲ့ဖို့ မှာရင်း အိမ်ရှိရာကို ကျုပ်တစ်ယောက်ထဲ ပြန်လာခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျုပ်အိမ်ဘယ်မှာလဲ ဆိုတဲ့ အမေး ကို ကျုပ်ကိုယ်တိုင် ကိုယ် ပြန်မဖြေပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သေသွားထက်လူတွေ နဲ့ယှဉ်ရင်တော့ ကျုပ် တို့ မိသားစုကတော်သေးတယ်ဆိုရမှာပေါ့။
ကျုပ်လိုပဲ လူအများစုလဲ သူတို့ အိမ်တွေ ကို ရှာမတွေ တော့ဘူး။ အိမ်တွေနေရာမှာ ရေပြင်ကြီးဖွေး လို့။ အဲဒီရက်မှာတော့ ဘုန်းကြီးက မျှကျွေးတဲ့ အစားလေးတွေ ပဲ အားလုံးမျှ စား ရင်း ကျုပ်တို့ အားလုံးနေကြရတာပေါ့။ ကျုပ်လို တောကတက်လာတဲ့လူ စစ်သားလူထွက် အတွက် အရေးမကြီးပေမဲ့ မိအေး နဲ့ ကလေးတွေ အခုလိုစားနေရတာ ကြည့်ပြီးကျုပ်တော့ လုံးလုံးစိတ်မကောင်းဘူး။ အဲဒီ အိပ်မက်ဆိုးကြီး အပြီးနှစ်ရက်သုံးရက်ရှိတော့ ရန်ကုန်က လူတွေရောက်လာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျုပ်တို့ဆီရောက်လာတဲ့ အခါ ရေဘူးနည်းနည်းနဲ့ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုတ် တစ်ထုတ်စီလား မသိဘူး ပေးနိုင်တာကလွဲလို့ဘာမှလဲ လုပ်မပေးနိုင် ခဲ့ဘူး။ ကျုပ် သမီးနဲ့ သား မောင်နှစ်မ နှစ်ယောက်ကလဲ အလှုကျတော့၊ အလှုရောက်ရင် စိုတဲ့ စကား ကို ရွယ်တူကလေး တွေကြားမှာ ပြောနေဆိုနေတုန်း။ အဲဒီအသံကြားတိုင်း ကျုပ် နှလုံးသား ကို အပ်နဲ့ ဆွသလိုပါပဲ။ အဲလိုအချိန်မျိုး မှာ မိအေး အနားရှိလို့လှမ်းကြည့်မိပြန် ရင်လဲ မလိုအပ်ပဲ မျက်လုံးပုတ်ခပ်ပုတ်ခပ် လုပ်တာကို သတိထားမိတယ်။ ကျုပ်တို့အိမ်အခြေ အနေ ၊ လယ်အခြေအနေ ၊ ကျွဲ တွေ ရဲ့ အခြေအနေ ၊ဆားကွင်းအခြေအနေ၊ ငါးဖမ်းလှေတွေ ရဲ့ အခြေအနေကို ကျုပ်နဲ့မိအေး ကြား မပြောဖြစ်အောင် သတိထားနေတာလဲ သိသာတယ်။ ဒါပေမဲ့ အိပ်မက်ဆိုးမက်တဲ့ နေ့ ကတည်းက ဒီနေ့ အထိဝတ်ထား တဲ့ အဝတ်တွေ က ကျုပ်တို့မိသားစု သာမက ဒီနေရာ မှာ ရှိနေတဲ့ မိသားစု တွေ ရဲ့အခြေအနေကို ပြောပြနေသလိုပါပဲ။
တဖြည်းဖြည်း နဲ့ စေတနာရှင်တွေ ပိုပိုရောက်လာတယ်။ ကျနော် အတွက် အဝတ်အစားလေး လေးတွေ ရလာတယ်။ စားစရာတွေ နည်းနည်းပါးပါးရလာတယ်။ မြို့ ပေါ်တွေမှာလို တော့ တာတာဆီးတာ မျိုး တွေ မရှိပေမဲ့ နည်းနည်း လူလည်ကျတဲ့ အပိုင်းတွေ တော့ ရှိတာပေါ့လေ။ အလှုရှင်တွေ ကလဲ စေတနာကောင်းကြပါတယ် ရေလမ်းခရီးကို လဲ သက်စွန့် ဆံဖျားလာကြ တယ်။ အာဏာပိုင်တွေ ရဲ့ ညှိုငြင်မှု ကိုခံပြီးတော့လဲ လာကြတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးက တော့ ပြောတယ် အမေရိကန် တို့ ပြင်သစ်တို့ က သင်္ဘောကြီးတွေ ရောက်နေပြီ ။ မကြာခင် ကျုပ် တို့ရွာတွေ ဆီလာပြီ လိုတာ မှန်သမျှကူညီ လိမ့်မယ်လို့ ပြောတယ်။ ကျုပ် ကတော့ ကျန်တာ ဘာမှ ပေးပေးမပေးပါ ဒီတစ်မိုးအတွက်စားဖို့ ရယ်။ ကျုပ်လယ်တွေ ကို စပါးစိုက်လို့ ရအောင် မြေပြင်ပေးပြီး မျိုးစပါးလေး ပေးရင်ကို တော်ပါပြီ။ ကျုပ်အလကား မယူပါဘူး ဒါတွေကို ပြန်ဆပ် ဆိုလဲ ဆပ်ပါ့မယ်။ ဒီနှစ်စပါးလေး စိုက်ငွေလေးတဲ့ အခါမှ ဆားကွင်းလေးကို လူငှားနဲ့ပြန်လုပ်ရင် ကျုပ်တို့ မိသားတစ်စုတော့ ခါးမလှသေးတောင် ဝမ်းဝမှာတော့ မပူရဘူးပေါ့။
ကျုပ်တို့ ရွာကို အလှုရှင်အဖွဲ တွေ ရောက်လာတယ် ဆိုပေမဲ့ သွားရေးခက်တော့ ဆင့်ပါးစပ် နှမ်းပက်သလို ဖြစ်နေတာပေါ့။ ဒါနဲ့ ကျုပ် ၊ မိအေး ၊ သမီးနဲ့ သား ကိုခေါ်ပြီး လပွတ္တာဘက်ကို အလှုရှင်စက်လှေ အကြုံနဲ့ လိုက်သွားဖို့စိတ်ကူးတယ်။ တစ်ဘက်က ကျုပ်မိသားစု ဝဝလင်လင် စားရဖို့ ဆိုတဲ့ အတ္တစိတ်ကလေး ပါသလို ၊ တဘက်ကလဲ ကျုပ်တို့လေးယောက် လျော့သွား ရင် တခြားလူတွေ လေးယောက်စာ ပိုရမယ် ဆိုတဲ့ အတွေးလေးလဲ တွေးမိ ပါတယ်။ ပွင့်ပွင့် လင်းလင်းပြောရရင်တော့ အမေရိကန်ကြီးတွေ ပြင်သစ်ကြီးတွေ လာတဲ့အခါ မြို့ ပေါ်ကို အရင်လာမယ် ။ အဲဒီတော့ အရင်ဆုံးတွေ့ ရမယ်။ ကျုပ်လယ်တွေ ပြင်ဖို့ စပါးစိုက် ဖို့စောစော လုပ်နိုင်မယ် ထင်တာပေါ့။ မိအေး ကလဲ ဘွဲ့ တောင်ရထားတာ ဆိုတော့ အမေရိကန်ကြီးတွေ နဲ့ စကားပြောနိုင် မှာပဲကို။ မိအေး ကို ဖွင့်တိုင်ပင်တော့ လဲ သဘောတူ တယ်။ နောက် ရွာ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုပြောတော့လဲ ဥက္ကဋ္ဌ က သွားချင်သွားလို့ ပြောတယ်။ နောက်တစ် ရက် အလှုရှင်တွေ ရောက်လာပြီး စိတ်ကူးကိုပြောပြတော့ သဘောကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင် လုပ်သူက ကျုပ်တို့ ကို ခေါ်သွားပေးမယ် ပြောတယ်။ ရေဆိပ် ဆင်းခါနီး ကိုစိန်သန်း တို့လူအုပ် က မဲလက်မှတ်ဆိုလား ဘာလားကို တင်တင်စီးစီးနဲ့အတင်းလုပ်ခိုင်းလို့လက်မှတ် ထိုးပေးလိုက် တာ ကလွဲရင် ကျန်တာ အဆင်ပြေတယ်ပြောရမှာပေါ့။ မဲလက်မှတ်လို့ သာ ပြောတယ် သူတို့ ပြောတဲ့ ပုံက အမှန်ခြစ်ပြီး ကြိုတင်မဲ လက်မှတ်ထိုးသွားတဲ့ ။ စိတ်ထဲ ဘဝင် မကျပေမဲ့ လောလောဆယ် မိသားစု အရေးကရှိသေးတာကို ။ စကားနဲ ရန်ဆဲပေါ့။
လပွတ္တာရောက်တော့ မြို့ ထဲ မှာ နေတာ ထက် မြို့ ပြင်ကားလမ်းမှာ သွားနေရင်ပို အဆင်ပြေတယ် လို့အလှုရှင်တွေ အကြံပေးတဲ့ အတိုင်း မြို့ ပြင်ကားလမ်းဘက်ထွက်ခဲ့ တယ်။ အလှုရှင်တွေ က ပေးခဲ့တဲ့ မိုးကာလေး ကို သုံးပြီး သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အောက် မှာပဲ အဖြစ်တဲလေးထိုးနေလိုက်တယ်။ နောက်နေ့ မနက်ကစလို့လာလိုက်တဲ့ ကားကြီးကားငယ် တွေ ။ တစ်ချို့ ကားတွေကလဲ ရပ်ပြီး ပစ္စည်းတွေ ကို စနစ်တကျဝေတယ်။ တချို့ ကတော့လဲ ဘာကြောင့် မှန်းမသိ ပစ်ပေးသွားတာမျိုးတွေ ရှိတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ရွာမှာထက်စာ ရင်တော့ ကျုပ်တို့ ပိုစားရတာအမှန်ပဲ ။ နိုင်ငံခြားက လူတွေ ဆိုတာ ဘယ်တော့လာမလဲ တွေးလိုက် အလှုရှင်တွေ လာရင် ပစ္စည်းလေးတွေ ယူလိုက်နဲ့ လက်ရှိကိုယ့်အဖြစ် ကိုယ်တောင် မေ့နေတယ်။
တစ်ရက်တော့ မနက်အစောကြီး ရဲတွေရယ် ၊ ကိုစိန်သန်းတို့ လို ဖြူစိမ်းကောင်တွေ ရယ် ရောက်လာပြီး ကျုပ်တို့ မိသားစုကို ဒီမှာနေခွင့် မရှိဘူး ။ သူတို့ နဲ့ လိုက်ခဲ့ပါ ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းကို ပို့ ပေးမယ် လို့ ပြောပြီးလာခေါ်တယ်။ ဒါနဲ့ ကျုပ်တို့ မိသားစုလဲ ဝမ်းသာအားရနဲ့လိုက်ခဲ့တာပေါ့။ ဟိုလဲရောက်ရော တပ်ထဲတုန်းက ကြည့်ဖူးတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားထဲကလို တဲလေး တွေ တန်းဆီဆောက်ထားတာကို တွေ့ ရတယ်။ အထဲမှာလဲ ဒန်အိုးဒန်ခွက် ဆန်အိတ် ၊ ဆီစား နဲ့အခြောက်အခြမ်းတွေ ကို တွေ့ ရတယ်။ ခနတာ တော့ လုံခြုံမှုရပြီ ဆိုတဲ့ အသိ နောက် ကျုပ် ကလေးတွေရော ၊ မိအေး နဲ့ ကျုပ်ကိုတိုင်ရော ကားသံနာထောင်လိုက် ပစ္စည်းလှု မဲ့သူမျှော်လိုက်နဲ့၊ ပစ္စည်တွေ သွားအလှုခံလိုက်ဆို တဲ့ ဘဝကို ကြည့်ရတာလဲ မဖြစ်လို့ သာရယ်။ တကယ်တမ်းတော့ တစ်စက်ကလေးမှ စိတ်ချမ်းသာတာ မဟုတ်ဘူး။ အခုလို ဆိုတော့ စခန်းက ဝေတဲ့ ရိက္ခာသွားထုတ်ရင် နိုင်ငံခြားကလာမဲ့ အကူအညီတွေကို ထိုင်စောင့်ယုံ ပဲပေါ့။
တစ်အောင့်နေတော့ ယဟတ်ယာဉ်သံတွေ ဆူညံပြီး အရာရှိကြီးတွေ ကျနော်တို့ တဲတန်းတွေ ထဲ ဝင်လာတာကို မြင်ရတယ်။ တပ်ထဲတုန်းကလဲ ကျုပ်ုက ဓါမနောက်ပိတ်ခွေ ရိုးရိုးရဲဘော် ဆိုတော့ ဘယ်သူဘယ်ဝါရယ်လို့ တော့လဲ မသိဘူးပေါ့။ ကျုပ်တို့ တဲတွေဆီ တစ်တဲ့ချင်းကြည့် ပြီးတော့ အားပေးစကားပြောပေါ့။ ကျုပ်တို့ လဲ ဝမ်းသာတာပေါ့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုလူကြီး တွေ လာတယ် ဆိုတော့။ လူကြီးတွေ ပြန်ထွက်သွားပြီး ခနနေတော့ ကျုပ်တို့ တဲတွေ ဆီကို တာဝန်ခံဆိုတဲ့ လူတွေရောက်လာပြီး ဆန်အိပ်တွေ နဲ့တခြားစားစာရာတွေကို ပြန်သယ်သွား တယ်။ ပါးစပ်ကလဲ ရေရှည်အတွက်ကျုပ်တို့ ကစေတနာနဲ့ လုပ်ပေးတာ ဘာညာဆိုတာတွေ ပြောတယ်။ ပြီးတော့ ဆန်နှစ်ပြည်ရယ် အခြောက်အခြမ်းနည်းနည်းရယ်ထဲ့ထားတဲ့ အိပ်တွေ ကို “ဒါတစ်ပတ်စာ” လို့ ပြောပြီးပေးတယ်။ နောက် ဘယ်အလှုရှင်တွေ ဆီကမှလဲ တိုက်ရိုက် လက်မခံဖို့မျက်နှာထားနဲ့ ပြောတယ်။
ကျုပ်ကလဲ တစ်ခုခုဆိုရင် မြုံ မနေတတ်တော့ နိုင်ငံခြား ကလူတွေကရော ဘယ်တော့ လာမလဲ လို့ မေးလိုက်မိတယ်။ အဲဒီမှာ ခေါင်းဆောင် လုပ်သူက ဒေါနဲ့ မန်နဲ့ဘယ်သူ့အကူအညီမှ မလိုဘူး နိုင်ငံတော်က ကူညီနိုင်တယ် ဘာညာ နဲ့ အော်ပါလေရော။ ကျုပ်တို့ကို မျိုးစပါး ပေးမှာလား ၊ လယ်တွေပြင်ပေးမှာလား ၊ ငွေချေးပေးမှာလား စတဲ့မေးခွန်းတွေ ဆက်တိုက်မေးလာတော့။ အဲဒီလူလဲ မျက်နှာကြီးနီရဲလာပြီး ဒေါသတကြီး အော်ပါလေရော။ သူပြောတဲ့ထဲမှာ ဖားရှာ ငါးရှာစားတို့၊ ချောကလက် မလိုဘူးဆိုတဲ့ အသံတွေ ပဲ ကြားနေရ တယ်။ မျက်လုံးထဲမှာတော့ တိုင်တချို့ ကလွဲပြီးဘာမှ မရှိတော့တဲ့ ကျုပ်တို့ အိမ်။ လူတွေ စွန်ကြဲတာကို သိမ်ငယ်တဲ့ မျက်လုံးတွေ နဲ့လက်ဖြန့် တောင်းနေတဲ့ ကျုပ်ချစ်တဲ့ မိအေး နဲ့သမီးနဲ့ သား နဲ့ တခြားလူတွေ။ နောက် သမီးနဲ့ သားကို လှုတဲ့ အလှုပွဲ။ နောက်ဆုံး ကြားလိုက်ရတဲ့ စကားက ဘယ်နိုင်ငံခြားသာမှ အဝင်မခံဘူး စာဖို့ မရှိရင်တောင်း စား ဆိုတဲ့ အသံ….
ကျုပ်ကို ကျုပ်ဘာလုပ်လိုက်မှန်း မသိခင်မှာ အဲဒီခေါင်းဆောင်လုပ်သူ ရဲ့ ပြူကျယ်နေတဲ့ မျက် လုံး ကျုပ်လက်နှစ်ဘက်နဲ့သူ့ လည်ပင်း အထိအတွေ့ ကိုပဲ သိတော့တယ်။ နောက် ချက်ချင်းလို ပဲ ကျုပ်ခေါင်းနဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အနှံ့ က နာကျင်မှု ။ ဒါပေမဲ့ ကျုပ်လက်ကို ဘယ်တော့ မှ မလွတ်ဘူး။ မုန်တိုင်းက ကျုပ်တို့ ဆီက ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ပဲ လုယူတာ၊ ကျုပ်လက်ထဲ ကလူ နဲ့သူလို လူမျိုးတွေ က ကျုပ်တို့ ဘဝတစ်ခုလုံးကို လုယူတာ။ ကျုပ် သားနဲ့သမီးရဲ့ အနာဂတ်ကို ဖျက်ပြစ်တာ။ ကျုပ်တို့ တစ်ရွာလုံးကိုဖျက်ပစ်တာ။ ကျုပ်နဲ့ဘဝတူတွေ ကလဲ ချကြပါတော့လား။ ထမင်းစားရယုံနဲ့ကျုပ်တို့ ဘဝ ရပ်တည်လို့ မှ မရတာ ။ ဘယ်မလဲ လယ်၊ ဘယ်မလဲနွား၊ ဘယ်မလဲ မျိုးစပါး။ ဘယ်သူတွေ ကရော ကျုပ်တို့ ကို အမြဲလှုနေနိုင်မလဲ တစ်လလား၊ ဆယ်လလား ၊ တစ်နှစ်လား ။ ရဟန်းသံဃာ မဟုတ်ပဲ သူများ လှုတာကို တစ်သက်လုံးထိုင် စားနေမယ်ဆိုရင်ရော ကျုပ်တို့ ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်မလဲ ။ ဘုရားကျွန်လား၊ သူဖုန်းစားလား ၊ ဒုက္ခိတတွေလား ။ ချကြပါတော့လား ကျုပ်နဲ့ဘဝတူလူတွေရယ် ။ အစာငတ်မှာ ကြောက်ပြီး ဘဝကို အငတ်ခံကြတော့မလို့ လား။ ကျုပ် တို့လူမျိုးတွေက ခန္တီပါရမီကောင်း တာပဲလား၊ သရဲဘောကြောင်တာပဲလား ။ ဓါမိုးအုပ်ချုပ်ခဲ့ တဲ့ အချိန်တွေ သိပ်ကြာလာခဲ့လို့ လား ။ မေးခွန်တွေ ရဲ့ အဖြေကို ရှာမတွေ့ ခင်ပဲ ကျုပ်တော့ အမှောင်အတိ ကျလို့ ။ နောက်ဆုံးမြင်လိုက်ရ တာက ဧရာမ သင်္ဘောကြီး ။ မိအေးနဲ့ကလေးတွေ လဲ ပျော်လို့ ။
လေဘေးကယ်ဆယ်ရေး စခန်းထဲမှာ အရှုးတစ်ယောက်စိတ်ဖောက်ပြီး ဥက္ကဋ္ဌ ကြီး ကို လည်ပင်းထညှစ်တာ ဘေးက လူတွေ ဝိုင်းကယ်လို့ ဥက္ကဋ္ဌ ကြီး ဘာမှ မဖြစ်တာဆိုတဲ့ သတင်းကို လူတွေ စုမိတိုင်းပြောတတ်တယ်။ နောက် အလှုရှင်တွေ နဲ့အလှုခံတွေ စုဝေးနေတဲ့ နေရာတိုင်း မှာ မနက်ဖြန်အတွက် ဘာမှ စိတ်မပူကြပါနဲ့ကျမ အမျိုးသား သင်္ဘောတွေ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်မဲ့လူတွေ သွားခေါ်နေတယ်လို့ငိုတစ်ခါရယ်တလှည့် ပြောနေတတ်တဲ့ လူရည်သန့်မိန်းမတစ်ယောက် ကိုလူတွေ သတိထားမိလာကြတယ်။
လူအများရဲ့ မစ်ဇရီပေါ်မှာ အရသာခံလို့ ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ စာစုတွေဖွဲ့တာကို (အထူးသဖြင့် ငွေနဲ့လုပ်စားတဲ့ တိုင်တဲနစ်လို ကားမျိုးကို အချစ်ဇာတ်လမ်းဆိုပြီး ထိုင်မကြည့်ပေမယ့် သဘောမကျခဲ့ပေမယ့်) တော်လှန်ရေးသမားတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်၊အိမ်ထောင်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေး ၀တ္ထုလေးကိုတော့လာဖတ်သွားပါတယ်..
“ကျုပ်မိန်းမ နဲ့ ပြောရင် ဘုရားသ္ခင်အလိုတော်အတိုင်းပေါ့ မအေး ရယ်လို့ ပြောတတ် ပြီး ကျုပ် နဲ့ ဆိုရင်တော့ ကံကံ၏ အကျိုးပေါ့ ကိုဖိုးတေ ရာလို့ ပြောတတ်တဲ့ ဓလေ့ ဒီရွာက ကျုပ်တို့မိသားစု နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ လူတွေမှာ ရှိတတ်တာပါပဲ”
ဒီလိုပါပဲ ဖြေရှင်းလို့မရတဲ့အရာတွေကို ဖမ်းမမှီနိုင်တဲ့ ဝေးကွာပြီးဖြေရှင်းစရာမလိုတဲ့ တစ်နေရာရာကို လွှင့်ပစ်တတ်ကြတာ humanity ရဲ့ ပြယုဒ်တစ်ခုပါ…
Life In Myanmar said...
we like your post. Your Janta is like your saying. So whatabloody thief of nation.